I frantsa 'lay reny malala - Merinaforever - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
I frantsa 'lay reny malala - Merinaforever
I Frantsa 'lay Reny Malala
Iniako odina tsy fantatra
Ianao ry lemak'i Betsimitatatra
Totofako anorenako orin'asa
Mba hanadinoako ny lasa
Fa aza dia tezitra mafy
F'ireto zanakao hitafy
Sady ho lavi- mosary
Raha pâtes no asolo ny vary
Atao veloma sahady daholo
Ireo Vohitra maherin'ny folo
Hahetry izy ireo ka hianjera,
Ho carrière ,amin'ny bildozera
"Ambohimanga no nanjakako"
Any aoriana ho fanariam-pako
"Antananarivo izay namoriako"
Hovako tsy haharikoriko.
Nofidiko tsy misalasala
Ho anao ny foko tsy miova
Ka misaotra ny mpandoro Rova.
Ho soloiko amin'ny slow
Le "mandihiza rahitsikitsika"
Soloiko RAP hipitika.
Z'inona 'zay fiteny mahonena ?
Ny frantsay 'nie iraisam-pirenena !
Tsy ampy morse ve ny Zatovo?
Amin'ny teny latinna manovo.
Tsy misy dikany ‘zay Nosantara
Tonga teto tamin'ny sambo fiara
Ny tena raitra dia ny Créole
Surtout ceux du métropole
Aleo ‘ngaha atao hoe Malagasy
Sao trop dur ka mangasiasy
Sady cool no vitsy mpanana
Ny langue vary amin'anana.
'Zay no tiako lazaina aminao
Je laisse le stylo aloha, fa tchao!
Sao aho lazainao mi-dérailla
Rah'tsy faly ianao soraty ny email.
Sokajy : Tanindrazana
Lejoba (17/03/2005 13:38:09)
Mipetraka eto France aho ary nanintona ahy ity tononkalo ity. Maneho zava-misy marina tokoa, toa manelingelina ny saina nefa tsy azo lavina.
Enga anie ka tsy hihitatra ny zavatra ratsy ataontsika telimoka entin'ny vahiny.
Ataovy toy ny voankazo an'ala : ny mamy atelemo, ny mangidy aloavy.
Merinaforever (23/03/2005 13:48:58)
Misaotra an'i Lejoba nanome hevitra:mahalana mantsy aho no mahita olona tohina amin'ny resaka tontolo iainana sy lova.Misy izay ranjokiko izay aza nilaza tamiko mihitsy hoe:"ka tsy hita anie leitsy fa tsy maintsy atao izay hivoaran'ny toe-karena ê!".Toy izany koa ilay "guide touristique" tany Taiwan notantarain'ny mpanao gazety iray.Notondroiny ny alan-trano manaka-danitra sy ny orin'asa sns ary hoy izy: "izao hitanareo izao dia tsy vao ela akory no tanimbary avokoa",sady jejojejo ery ny anao lahy.
rabona (25/03/2005 15:33:54)
tandremo fa raha merina ianao tokony tsy hanafangaro ny teny Malagasy amin'ny teny Frantsay, satria ny teny malagasy dia ampy tsara hilazanao izay tianao ho lazaina , nipetraka sy nianatra taty France aho fa tsy sahy milaza fa La France dia reniko malalako , ary tandremo tsy tokony hisy hidiran'ny mpandoro rova mihitsy ny ity tononkalo ity raha Frantsa no resaka mahereza fa tena mbola lavitry ny hatao hoe merina ianao zatovo!!!
Merinaforever (25/03/2005 21:48:45)
Dia misaotra anao Andriamatoa rabona manome ny hevitrao momba ny tononkalo,ary misaotra anao koa momba ny fanintsian-kevitra nalefanao eo amin'ny tononkalo hafa noho ity.Tena tsapa mihitsy ny fahiratan-tsaina anananao ary mahavelombelona ny fanantenana.Raha toa anao daholo ny Merina dia ho maro ny tabiha sy rehareha.Ka dia averina indray ny fisaorana sy fankatelemana.Misaotra tompoko.Hoy i Merinaforever.
Mpanoratra : Merinaforever
Nampiditra : Merinaforever
Daty : 17/03/2005
Mpamangy : 1585
Ny maha kristianina
Ny fitiavako voahosy
Aza mandika vilana